ရွှေဘ - ဝီကီပီးဒီးယား
၃၀ မတ် ၁၉၂၈
ဒီဇင်ဘာ ၁၊ ၁၉၈၈(၁၉၈၈-ဖော်ပြချက် အမှား - နားမလည်သော ပုဒ်ဖြတ် စာလုံး "၁"။-0၁) (အသက် ၆၀)
ရွှေဘ (၃၀ မတ် ၁၉၂၈-၁ ဒီဇင်ဘာ ၁၉၈၈) သည် မြန်မာနိုင်ငံသား သရုပ်ဆောင်နှင့် ဒါရိုက်တာတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ၁၉၄၀ ဆယ်စုနှစ် နှောင်းပိုင်းတွင် ကျော်ကြားသော အက်ရှင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းများကို ထုတ်ဝေဖြန့်ချိခဲ့သော သမ္မတလူကြမ်း ရုပ်ရှင်အုပ်စုကို တည်ထောင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။
၁၉၂၈-ခုနှစ် မတ်လ(၃၀)ရက်တွင် ရွှေဘကို ပုသိမ်မြို့ မြို့ပတ်လမ်း၌ ပန်းချီဆရာကြီး ဦးအောင်မြတ် နှင့် ဒေါ်ကွမ်း တို့က ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ မွေးချင်း လေးဦးအနက် အငယ်ဆုံး ဖြစ်၏။ အမည်ရင်း အေးကြည်ဖြစ်ပြီး အတန်းပညာကို အလယ်တန်းအထိ သာသင်ယူခဲ့ဖူးသည်။ ရေကူး၊ လက်ဝှေ့ထိုး၊ ဒိုင်ဗင်ထိုး၊ မြင်းစီး စသည့် အကြမ်းအရမ်း ကစားနည်းများကို နှစ်သက်သည်။
ငယ်စဉ်ကပင် ရုပ်ရှင်ဘက်၌ ဝါသနာပါသဖြင့် အသက် ၁၇-နှစ်တွင် ရန်ကုန်သို့ တစ်ယောက်တည်း ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ရန်ကုန်တွင် ရေကျော်၊ လမ်း ၅၀ ရှိ ဦးလေးအိမ်၌ တည်းခိုနေထိုင်သည်။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အဖြစ် သံဖြူဆရာ အလုပ် လုပ်ခဲ့ရသည်။ တစ်ဖက်မှလည်း လက်ဝှေ့ကျော် ကျားဘညိမ်းထံ လက်ဝှေ့ပညာ သင်ယူလေ့လာခဲ့သည်။
၁၉၄၄-ခုနှစ်တွင် ပဲရော့ရုပ်ရှင် ကုမ္ပဏီမှ ဒါရိုက်တာ ဖေကြိုင်က သတ္တိ ဗျတ္တိ အမည်ရှိ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရိုက်ကူးရန် စီစဉ်သည်။ ခေါင်းဆောင်မင်းသားအဖြစ် ရွေးချယ်ထားသူမှာ မင်းသားကျော်ရွှေ (နောင် ကျော်ဆွေဟုအမည် ပြောင်းလဲခဲ့သူ) ဖြစ်သည်။ ဇာတ်လမ်းအရ မင်းသား ကျော်ရွှေသည် မော်တော်ဆိုင်ကယ် စီးကာ စော်ဘွားကြီးကုန်း တောင်ကုန်းပေါ်မှ ခုန်ချရမည့် အခန်းပါရှိသည်။ ဒါရိုက်တာဖေကြိုင်က ဤအခန်းကို လူစားမထိုးဘဲ မင်းသားကျော်ရွှေ ကိုယ်တိုင် သရုပ်ဆောင်ရန် ပြောဆိုသည်။ သို့သော် ကျော်ရွှေက ငြင်းပယ်သည်။ သူ့အနေဖြင့် လူစားထိုး ရိုက်ကူးရန်သာ ဆန္ဒရှိခဲ့သည်။
နောက်ဆုံး ဒါရိုက်တာနှင့် သရုပ်ဆောင်မင်းသားအကြား အချေအတင် အငြင်းအခုံ ဖြစ်ကြကာ အစီအစဉ် ပျက်သွားသည်။ ဒါရိုက်တာ ဖေကြိုင်က မင်းသားကျော်ရွှေအား "မလုပ်နိုင်ရင် ထွက်သွား၊ မင်းမရှိရင်လည်း မင်းရဲ့အဘ လာလိမ့်မယ်"ဟူ၍ ရင့်ရင့်သီးသီး ပြောဆိုခဲ့သည် ဆိုပါသည်။ ဤသို့ဖြင့် ဒါရိုက်တာဖေကြိုင်က သရုပ်ဆောင်မင်းသားသစ် အပူတပြင်း ရှာဖွေရတော့သည်။ နောက်ဆုံး ရေကျော် လမ်း၅၀ တွင် သံဖြူလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသော အေးကြည်ဆိုသော လူငယ်ကလေးကို သွားတွေ့ကြသည်။ အေးကြည်သည် ဒါရိုက်တာ ဆရာခန့်၏ လက်နက်ပုန်း အသံတိတ်ဇာတ်ကားတွင် ဇာတ်ရံအဖြစ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ဖူးသည် ဆို၏။ နောက်ဆုံး ဒါရိုက်တာ ပဲရော့ဖေကြိုင်ပြောသည့် ကျော်ရွှေမရှိလျှင် ကျော်ရွှေ၏ အဘလာလိမ့်မည် ဟူသောစကားအရပင် လူငယ်ကလေးမှာ ရွှေဘ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ရွှေဘ၊ နှင်းဆီ နှင့် တင်ညွန့်
ရွှေဘ နှင့် တင်တင်နွဲ့
ရွှေဘ နှင့် တင်တင်လှ
ရွှေဘ နှင့် ခင်စိန်ဝင်း
↑ Wakeman & Tin 2009, p. 37.
Wakeman၊ Carolyn; Tin၊ San San (2009)။ No Time for Dreams: Living in Burma Under Military Rule။ Rowman & Littlefield။ ISBN 9780742557192။ CS1 maint: ref=harv (link)
^ ကေမြူး၊ ထွန်းဖောင်ဒေးရှင်းဘဏ် စာပေကော်မတီ၊ ရန်ကုန်၊ ၂၀၁၁ ဇွန်လ. "ပြည်တော်ချစ်မင်းသား ရွှေဘ ၏ ဘဝနှင့် အနုပညာ ရုပ်ပုံလွှာ"
တင်နိုင်တိုး ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ထူးတို့၏ ဘဝတစ်ကွေ့ Weekly Eleven ဂျာနယ်(၆.၅.၂၀ဝ၉)
မြန်မာ့ ရုပ်ရှင်လောကမှ ပြိုင်စံရှားတဲ့ စတန့်မင်းသားကြီး(မိုးမြင့်မောင်)ထူးဆန်းထွေလာ ပြည်မြန်မာ အမှတ်(၂)
အထင်ရှားဆုံး အကျော်ကြားဆုံးနှင့် ပရိသတ်အင်အား အများဆုံး မင်းသားများ (မိုးမြင့်ဦး)မိုးဂျာနယ်(၁၉၉၅၊ မေလ)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရွှေဘ&oldid=650589" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၁ မတ် ၂၀၂၁၊ ၁၈:၀၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။